Best Orchid mgbanwe
Best Orchid ọnụego mgbanwe ọnụego taa site na netwọk ego ego. Ebe kachasị mma ịzụta ma ọ bụ ire Orchid taa.
Best Buy price Orchid $ 0.195119 OXT/USDT Fatbtc
Ahịa ahia kacha mma Orchid $ 0.207883 OXT/BTC Hotbit
Ọnụego kacha mma Orchid bụ ọnụego kachasị mma ugbu a na mgbanwe ego ego. Ọnụ ọgụgụ ndị na-azụ ahịa na ndị na-ere Orchid na onye na-agbanyere ego crypto ọ bụla dị iche. Ọ dị mfe ịghọta na Orchid ọnụego mgbanwe ego ego n'otu n'otu na-ahaziri ọnye mgbanwe crypto ọ bụla. Ekwesịrị ịchọ nchọnchọ Orchid site na nyochaa ọnụego mgbanwe nke mgbanwe ego crypto niile ma họrọ nke kachasị mma.
Best Orchid obere akpa
June 06, 2020 Kachasị mma ịzụta Orchid na June 06, 2020 Ọnụ ahịa kacha mma Orchid na $ sell_pair ụzọ azụmaahịa na $ sell_market ahịa.
Elekere Orchid obere akpa bụ nyocha nke ndị nwe ego ego. Mpempe akwụkwọ ego crypto nwere oke nke: ntụkwasị obi, ịdị mfe, nchekwa. Mpempe akwụkwọ kachasị mma Orchid kwesịrị ịnwe ntụkwasị obi kacha mma na njikwa nchekwa n'echiche anyị. Anyị na-amụ ahịa Orchid ahịa mgbanwe ego ego ego, anyị wee họrọ azụmaahịa kachasị mma maka ịzụ na ire.
Ụlọ ahịa Orchid kacha mma
Kachasị mma Orchid ịzụta na ire ọnụ ahịa maka taa bụ 06/06/2020 n'isi nke ibe. N'ime tebụl ọnụego kachasị mma nke Orchid ị ga - ahụ ọnụahịa dị iche iche nke Orchid. You nwere ike ịhọrọ ndị kachasị mma, na mgbanwe ya ka mma ịchọta mgbanwe ego ego. Ihe ndekọ ntanetị "Kasị mma Orchid maka taa 06/06/2020" na-enyocha ọnụego ego ego kachasị mma na ntanetị. Kachasị mma Orchid ọnụego azụtara egosiri - egosiri na elu peeji ahụ site na uru a na-akpọghachi. Orchid na dollar.
USDT BTC ETH USD EUR
Tebụl na-egosi taa ọnụahịa Orchid nke ọ bụla site na netwọk ego ego. A gbanwere ọnụego mgbanwe maka ọnụọgụ abụọ abụọ na dollar US.
Kraken OXT/USD $ 0.20 $ 76 568 -
Kraken OXT/EUR $ 0.20 $ 68 072 -
Kraken OXT/BTC $ 0.20 $ 66 674 -
Kraken OXT/ETH $ 0.20 $ 15 719 -
Gemini OXT/USD $ 0.20 $ 35 145 -
Gemini OXT/ETH $ 0.20 $ 2 485 -
Gemini OXT/BTC $ 0.20 $ 968 -
Bittrex OXT/BTC $ 0.20 $ 27 180 -
Bittrex OXT/USDT $ 0.20 $ 16 878 -
CoinEx OXT/USDT $ 0.20 $ 73 886 -
CoinEx OXT/BTC $ 0.20 $ 19 209 -
OKEx OXT/USDT $ 0.20 $ 56 319 -
OKEx OXT/BTC $ 0.20 $ 10 743 -
Hoo OXT/USDT $ 0.20 $ 28 508 -
MXC OXT/USDT $ 0.20 $ 210 402 -
Uniswap OXT/ETH $ 0.20 $ 20 451 -
BiKi OXT/USDT $ 0.20 $ 29 061 -
Fatbtc OXT/USDT $ 0.20 $ 1 937 -
Bilaxy OXT/USDT $ 0.20 $ 8 906 -
Coinbase Pro OXT/USD $ 0.20 $ 1 890 354 -
IDEX OXT/ETH $ 0.20 $ 553 -
Hotbit OXT/BTC $ 0.21 $ 37 485 -
Ihe kachasị mma Orchid na-azụkarị ego mgbe anyị zụtara ego ego abụghị dollar, mana maka ego ma ọ bụ crypto dị iche na dollar. Anyị na-egosipụta oge kacha mma Orchid ọnụego zụta nke dollar maka ntụnyere dị mfe. Na ibe dị n'akụkụ nhọrọ kacha mma Orchid, ego ndị ahụ na-enye ọnụahịa azụmaahịa kacha mma na-egosipụta. N’akụkụ ọnụ ahịa ire ahịa nke ego ego ị ga - ahụ ụzọ njikọ n’ahịa mgbanwe nke Orchid na - ere kacha mma.
Maka mkpụrụ ego Orchid ka erere ndị anyị kacha egosipụta n'ọhịa "ụzọ abụọ". Mgbanwe kachasị mma maka ịzụ ma ọ bụ ire Orchid edepụtara na tebụl dị na peeji a. Edebere mgbanwe ndị a na ọnụego kacha mma a gbanwere na dollar mgbe ị na-azụ ma na-ere Orchid gaa ego ndị ọzọ na cryptocurrenrency. Jiri nyo nke ego dị iche iche dị na tebụl nke mgbanwe ego ego kachasị mma iji hụ Orchid maka ego achọrọ ma ọ bụ ego ego chọrọ.